एक्सनमा प्रहरी : उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि पक्राउ पर्ने ! - Yatra Daily
Home राजनीति एक्सनमा प्रहरी : उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि पक्राउ पर्ने !
वीरगन्ज ५ कातिक । हाई प्रोफाइल अपराधीहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि अन्य नेताहरुसमेत त्रसित भएका छन् । प्रहरीले विगतका राजनीतिक आवरणमा छोपिएका अपराध खोतल्ने डरले उनीहरु डराएका छन् ।
Previous articleलोकतन्त्रमाथि ठुलै प्रहार हुनेस्थिती देखिएको छ : मन्त्री जितेन्द्र सोनल
Next article५ लाख ८३ हजार अवैध रकम सहित हुण्डी कारोबारमा संलग्न कलवार पक्राउ